Paytm APK ကိုနောက်ဆုံးဗားရှင်း (4.4.1) အခမဲ့ဒေါင်းလုပ် | WikiWon
mujeer ဇွန်လ 7, 20175မှတ်ချက်များ
#PaytmKaro for the fastest online payments and mobile recharge – pay for online recharge & မိုဘိုင်းဥပဒေကြမ်းများ, DTH ဓာတ်အား & utility ကိုဥပဒေကြမ်းများ, ခရီးသွား, ရုပ်ရှင်တွေ, စျေးဝယ်သို့မဟုတ်ငွေပေးချေမှုပေးပို့သို့မဟုတ်လကျခံဖို့. လျင်မြန်သော, လွယ်ကူသော, အသုံးဝင်သောနှင့်လုံခြုံ, Paytm အားဖြင့်ယုံကြည်စိတ်ချရနေသည် 15+ ကုဋေဖောက်သည်.
ပေးပို့ / Receive Payment
Accept payment from customers or friends, တစ်ဦး QR ကုဒ်ကိုစကင်ဖတ်ဖို့အားဖြင့်ပိုက်ဆံပေးပို့ / OTP စိစစ်အတည်ပြုသုံးပြီး. ဒါ့အပြင် Uber နှင့်သင်၏တက္ကစီ / အလိုအလျောက်စီးဘို့အပေးဆောင်ဖို့ Paytm ပိုက်ဆံအိတ်ကိုသုံးပါ, Meru အဘိဓါန်, Tksiforsure နှင့် Jugnu.
Explore places near you that accept payment through the Paytm wallet. Pay for your local kirana shop, retail stores (like Big Bazaar, နောက်ထပ်, Central etc.), or even for restaurants, petrol pumps (Indian Oil Petrol pumps, Bharat Petroleum), နို့ (Mother Dairy) through Paytm. Pay on your favourite sites like IRCTC, Dominos, PVR, Zomato, Swiggy, Foodpanda and more.
Shop for the top selling products in women and men fashion, မိုဘိုင်းဖုန်း & electronics, home & kitchen, ပစ္စည်းများ, jewelry, home appliances, ကလေး & kids and more.
Android App များ, သတင်း	paytm apk latest version (4.4.1) free download, paytm app download apk, paytm app for nokia, paytm download 9apps, paytm download for pc, paytm login my account, paytm wallet apk, paytm wallet app download	bookmark
ယခင်အပိုဒ် ဘယ်လို TransferWise လုပ်ငန်းခွင် APK ကိုမ
next ကိုပုဒ်မ USD ဖြင့် Xiaomi က Redmi 4x စျေး, အားလုံးစျေးနှုန်းများ, 16GB အထိဖြန့်ချိနေ့စွဲ